220kV polymer arrester
220kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa kii ugu dambeeyay ee casriyeysan over danab ilaaliye ee khadka qaybinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos-u-dhaca danab hawl-wadeen ah, kan hadda socda ee soo kordhayaa waa onl ...
110kV polymer danab nuuca saldhiga
110kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa difaacii ugu dambeeyay ee kor u dhaafaya － danab ilaaliyaha qaybinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos-u-dhaca danab hawl-wadeen ah, kan hadda socda ee soo kordhayaa waa onl ...
110kV polymer arrester
66kV polymer danab nuuca saldhiga
66kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa difaacii ugu dambeeyay ee kor u dhaafaya － danab ee khadka fidinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos-u-dhaca danab magacaaban, kan hadda socda ee sii kordhaya waa ...
66kV polymer arrester
35kV polymer arrester
35kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa difaacii ugu dambeeyay ee kor u dhaafaya － danab ilaaliyaha qaybinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos-u-dhaca danab magacaaban, kan hadda socda ee sii kordhaya waa ...
10kV polymer arrester arrester
10kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa difaacii ugu dambeeyay ee kor u dhaafaya － danab ilaaliyaha qaybinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos ku xusan danab hawlgal magac u yaal ah, kan hadda sii kordhaya ee arrester-ka ayaa daaran ...
6kV polymer arrester
6kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa difaacii ugu dambeeyay ee kor u dhaafaya － danab ilaaliyaha qaybinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos-u-dhaca danab magacaaban, kan hadda socda ee sii kordhaya waa ...
3kV polymer arrester
3kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester waa difaacii ugu dambeeyay ee kor u dhaafaya － danab ilaaliyaha qaybinta iyo qalabka saldhigga korontada. Waxaa lagu daray zinc oxide iyo biraha kale ee oksaydhka ah asalka 'disc resistor disc', astaamaha volt-ampere iyo awooda xilligan xaadirka ah ee ka hortagga dhibka iska caabiyaha ayaa si aad ah loo hagaajiyay marka la barbardhigo nooca SiC argester argester. Hoos-u-dhaca danab hawl-wadeen ah, kan hadda socda ee soo kordhayaa waa uun ...
Noocyada iskuxirka fiyuusyada guud ee "K" iyo "T" / walxaha loo kala qaybiyaa waxay u kala baxaan "KB, KU, KS" noocyo hoosaadyo fiyuusyo / walxo tixraacaya nooca guud, nooca guud iyo nooca furitaanka heerka IEC-282. Waxay ku habboon yihiin jarista fiyuus-ka-bixidda oo leh 11-36kV. 1. Moodelkii ugu dambeeyay ee badhanka: waxaa laga sameeyaa nooca "K" ee fiyuuska isku xidha oo leh xawaaraha 6-8 dhalaalaya iyo nooca "T" oo leh xawaare dhalaalaya 10-13 Iyaga ayaa si weyn loogu isticmaalaa in lagu gooyo fiyuuska la gooyo. 2. Qaabka guud w ...
fiyuus ka baxa taxanaha YK4
General Fuse Cutout waa nooc ka mid ah danab sare oo bannaanka ka ah qaybiyaha qaybinta ama khadadka qaybinta waxaana ugu horreyn loo adeegsadaa in laga ilaaliyo beddelaadaha ama khadadka ka soo horjeedka saameynta ay ku yeesheen wareegga gaaban, culeyska iyo rogista hadda. Qaybta goos gooska ah ee fiyuusku ka kooban yahay waxay ka kooban tahay taageerada qalab-fidiyaha iyo qalabka xarkaha fiyuuska, xiriirada ma guurtada ah ee ku kala xidhan labada dhinac ee taageeriyaha qalabka wax lagu xiro iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaaqa oo lagu rakibay labada daraf ee fiyuuska xambaara. Gudaha qalabka side fiyuuska waa dab bakhtiiye ...
fiyuus ka baxa bixitaanka taxanaha YK3